Al-Shabaab oo weerartay oo Goob muhiim ah oo ku taalla Kenya | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab oo weerartay oo Goob muhiim ah oo ku taalla Kenya
Tan iyo 2011 markii Kenya Ciidankeeda soo galeen, Al-Shabaab ayaa weeraro waaweyn ka fulisay Nairobi iyo Garissa oo boqolaal qof ku dishay.
NAIROBI, Kenya - Shan qof ayaa ku dhintay weerar shalay Al-Shabaab ku qaadey goob dhismo ka socday oo ku taalla degaanka Bodhei Majengo, ee gobolka Lamu, oo ku dhaw xadka Soomaaliya.
Hal shaqaale, oo ah muwaadin u dhashay China ayaa lagu afduubey, kaasoo markii dambe ay sii daayeen xoogaga Al-Shabaab, oo sida la sheegay weerarka kadib ka tallaabsadey xuduudka.
Sida booliska Kenya uu sheegay, dadka lagu dilay weerarka waxay dhisayeen wado laami ah oo la saarayo inta u dhaxaysa xadka Lamu, Itoobiya iyo Sudan, si ay u isticmaalaan gaadiidka Dekada Lamu wax kasoo qaada.
Al-Shabaab ayaa burburisay Buundo dhismo ku socday degaanka Majengo-Omolo, waxaana booliska uu sheegay in gurmad deg deg ah sameeyeen, taasoo sababtay in lasoo furto ninka u dhashay China.
Gudoomiyaha Lamu Irungu Macharia ayaa sheegay in ay ku raadjoogaan Ciidan xoogagii Al-Shabaab ee ka dambeeyay weerarka lagu dilay shanta qof, oo dhamaantood Kenyan ahaa.
Meydadka ayaa loo qaadey saldhig Ciidanka Badda Kenya ku leeyihiin Lamu. Al-Shabaab ayaa gubtay baabuurta goobta dhismaha taallay iyo mootiin ay isticmaali jireen shaqaalaha la dilay.
Dadka degaanka ayaa loogu baaqey inay feejignaadaan kadib weerarka, islamarkaana ay booliska ku wargeliyaan wax walboo ay ka shakiyaan. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka ay ku dishay Muwaadiniin u dhashay China.
Bishii January 2022, Al-Shabaab ayaa weerartay gaadiidka xamuul ah oo Lamu ku safrayay, waxayna ku dishay ku dhawaad 10 qof. Shirkad China laga leeyahay oo Lamu iyo Gobolada kale ee xadka ayaa la sheegay in cabsi amni soo wajahday.
Wadada la dhisayay oo gaareysa 257-KM ayaa isku xirta Lamu, Garissa iyo Ijara ayaa qeyb ka ah Mashruuca LAPSSET oo sidoo kale lagu dhisayo jid kale oo 113-KM dhan, kaasoo Ijara ku xira Sangailu-Hulugho.
Dalxiiska iyo Mashaariicda ka socday waqooyiga bari ee Kenya iyo Lamu waxaa saameeyay weerarada Al-Shabaab oo socday tan iyo 2011, iyadoo dadka aan Muslimka ahayd ay ka carareen meelaha ku dhaw xadka kadib markii la beegsaday.
Comments Topics: al-shabaab kenya